ကြှနျုပျတို့အကွောငျး | ငွေစာရင်း
ငွေစာရင်း, တစ်ဦးရိုရုစကားလုံးအဓိပ္ပာယ် “သတင်းများသို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာ” အသုံးဝင်သောပေးမှာရည်ရွယ်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားသတင်းနှင့်အသိပညာအခြေစိုက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်, အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများအပေါ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်သိကောင်းစရာများ contents တွေကို, စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အခြားအထွေထွေပြဿနာများကို. အဆိုပါ website တွင်စတင်ခဲ့သည် 1St အောက်တိုဘာလ 2011.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့တွင်စျေးကွက်နှင့်အရောင်းများကဲ့သို့ဆက်စပ်နယ်ပယ်များတွင်သက်ဆိုင်အတွေ့အကြုံများ၏အသက်အရွယ်နှင့်အတူဝါရင့်ပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်, စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု, ကြားဆက်ဆံရေးစသည်တို့ကို.
Fisayo နည်းပညာရာဘကကောလိပ်တစ်ခုဘွဲ့ရဖြစ်ပါသည်. Skye ဘဏ် Plc နဲ့တူအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်သူအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းရရှိထားသူ, Vmobile နိုင်ဂျီးရီးယား (ယခု Airtel), လူနာ Tech မှကမ္ဘာ့ (ယခု Nextek ပလက်ဖောင်းများ) နှင့် Eshkol ရေနံ.
သူနှင့်အတူအလုပ်ဖြစ်တယ် ISUD လက်မှုပညာ, တစ်ဦး ဂို့အတွက် web design မှာကုမ္ပဏီ, နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် Entrepreneurship ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လျှို့ဝှက်ချက်များအပေါ်သူ၏စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေ.
Anie လက်ရှိတစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါသည်, ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, နှင့်စျေးကွက်အတွက်သင်တန်းဆရာ. သူဟာလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများ၏စီစဉ်သူများအားဖြင့်အတူတူထားလေ့ကျင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်တစ်ဦးသင်တန်းနည်းပြအဖြစ်တပ်ဆင်ထား, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများ (သဘောတရားများနှင့်အတူ, ဗျူဟာများ, နှင့်အာရုံအဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်). သူက ebooks အဘို့ဖန်တီးမှုအရေးအသားသို့လည်းဖြစ်ပါတယ်, အင်္ဂါရပ်ပစ္စည်းများ, မိတ္တူ, script များနှင့်စျေးကွက်ဆက်သွယ်ရေးအရေးအသား၏အခြားပုံစံများ.
သူ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာထိပ်တန်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေး၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိတွေ့မှု၏မိမိပိုင်သောအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေသည်, ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ 25 တိုးတက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတာဝန်ဝတ္တရား၏အနှစ်, ကြော်ငြာသက်ဆိုင်သော - ယေဘုယျအားဖြင့်ပေါင်းစည်း Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးသို့မဟုတ် IMC ၏ဧရိယာထဲမှာ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရောင်းရဆုံး, ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး (PR စနစ်), အဖြစ်အပျက်, စသည်တို့ကို, နှင့်ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အားလုံးပါဝင်နိုင်, တိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဖောက်သည် / client ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်အသစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု.
မပညာရှင်ပီသစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားဆရာကဲ့သို့သောသော်လည်း, Joanie တစ်ကြီးထွားလာသည် 1980 ဂို့တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ, နိုင်ဂျီးရီးယား, နှင့်လည်း Business Administration အတွက်မာစတာဒီဂရီကိုသိမ်းယူ (MBA သင်တန်း) အ Ambrose မဟာမိတ်များ University မှ, Ekpoma, နိုင်ဂျီးရီးယား.
ဘား. Yulia Kasyankova, နေ MA, LLM, တွဲဖက်ပါမောက္ခ
Yulia Kasyankova ရုရှားရှေ့နေဖြစ်ပါသည်, စာရေးဆရာနှင့်ကထိက. သူမသည်ဒေသနာ၌ငွေရတတ်သောနောက်ခံရှိပါတယ်, စည်းရုံးရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပညတ်တရားတော်ကိုအတိုင်ပင်ခံအတွက်သင်တန်းများနှင့်ပညာရေးသင်တန်းများအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်. သူမ၏အကျိုးစီးပွားလည်းစိတ်ပညာပါဝင်, အဘိဓမ္မာ, သမိုင်းနှင့်စာပေ. သူမသည်ယခုနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်နေထိုင်.
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး Manager ကို
Obe Rasheed Kwara ပြည်နယ် Polytechnic မှစာရင်းကိုင်တစ်ဦးဘွဲ့ရသည်, Ilorin. အထက်တန်းကျောင်းကနေသူ့ကိုအတွက်အနုပညာခဲ့ပွီး, ဒီကသူ့ကိုသတင်းအချက်အလက်အထောက်အပံ့များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပေး enable လိမ့်မည်ဟုသင်တန်းများကိုလိုက်ရန်လိုအပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်. သူကကွန်ပျူတာတစ်ခု Aptech လက်မှတ်ရ Professional ကဖြစ်ပါတယ်.
မိမိအအနုပညာနောက်ခံမှအဖြေတစ်ခုအဖြစ်ပုံရိပ်ယောင်ဒီဇိုင်း၏ဆက်စပ်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပွီး, သူဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများအတွက်ဒီပလိုမာကိုတက် ယူ. Log in ဝင်ရန်ပရင့်ထုတ်ရန်မီဒီယာ Institute မှထုတ်လုပ်မှုကိုရိုက်ထုတ်, စွန်ပလွံ Grove ဂို့.
သူကမာကျူရီ Birds ဂိမ်း Limited မှကျယ်ပြန့်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတှေ့အကွုံကိုရရှိထားသူ, တစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ, လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ, Echonews သတင်းစာများလီမိတက်, သတင်းစာ, မီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးသုတေသနကုမ္ပဏီ.
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Manager ကို